Nei Kubatana Kwepfungwa Kuchave Kwakakosha MuIno Yezororo Kubudirira Kwekutengesa | Martech Zone
Chitatu, October 20, 2021 Chitatu, October 20, 2021 Thea C. Myhrvold
Kwerinopfuura gore, vatengesi vanga vachitarisana nedenda rekukanganisa pakutengesa uye zvinoita sekunge musika wakagadzirirwa kusangana neimwezve mwaka unonetsa wekutenga zororo muna 2021. Kukanganisa kwekugadzira nekutengesa zvinhu kuri kuramba kuchikanganisa kugona kuchengeta zvinyorwa. zvakavimbika mustock. Mitemo yekuchengetedza inoramba ichitadzisa vatengi kushanya muchitoro. Uye kushomeka kwevashandi kunosiya zvitoro zvichipopota kana zvasvika pakushandira vatengi vanoyambuka nzira. Hapana chimwe cheizvi chinofadza kana nhau dzakajeka dzenguva yezororo yekutengesa tarisiro.
Zvisinei nekufanotaura kusiririsa, kwave nekuvandudzwa kwakati wandei kune zvekutengesa zvekutengesa ruzivo. Vatengi vazhinji vakanakidzwa nezvinhu zvakazvarwa nedenda senge curbside pick-up, mubhadharo usingabatike, uye kutakura kwezuva rimwe chete. Aya maficha anoshanda nemazvo nekuti vatengi vanopindura zvakanaka kwavari. Kana mutengesi achida kuita shanduko uye kushanda nevatengi kuita kuti ruzivo rwekutengesa rwusina chokwadi rwuve nani uye rwunogoneka, munhu wese anohwina. Munzvimbo iyi yekutengesa, iyo mhando yekuchinjika inoratidza kuti iko kunzwira tsitsi kwevatengi, kwete hazvo mitengo yakaderera, iyo inogona kupedzisira yaendesa kutengesa.
Tsitsi dzemutengi hachisi chinhu chitsva. Muchokwadi, 80 muzana yevatengi vanogadzika sarudzo dzavo dzekutengesa pamanzwiro.
Deloitte, Kuratidzira kukosha kwekuita-inotungamirwa nekuita
Vanonzwa sei nezvechigadzirwa kana sevhisi, maratidziro avari kuitwa kwavari, uye nemanzwiro avo kune mutengesi anozvipa. Kugadzira kubatana nevatengi kwagara kuri chinhu chakakosha mukutengesa, asi panguva dzakanyanya kunetsa sedzino, kunzwira tsitsi nekuumba hukama hwevatengi kunogona kupa shopu yako kukwikwidza kwainoda.
Isu tatoona inotevera-gen tsitsi dzinopinda musanganiswa nekubuda kwe online chatbots, runyorwa rwekurudziro, uye chaiwo vabatsiri vekutenga. Artificial intelligence uye otomatiki yekudzokorodza mutengi-sevhisi mabasa akavandudza ruzivo rwepamhepo chokwadi, asi chiyero chekubudirira kwavo chinongogumira kune zvakajairwa, zviri nyore-ku-kero, nyaya. Kugona kwavo kukurumidzira nekuvhara kutengesa kwave kuri kweparutivi. Zvinoita senge ma chatbots akanaka pakuverenga zvinyorwa asi haasati ave neawo echokwadi nounhu izvo zvaizoita kuti vawedzere kuwirirana - pamwero wemanzwiro, zvirinani.
Izvo zvakati, imwe nzvimbo umo kunzwira tsitsi kunoratidzika kunge kuri kushanda nemazvo kuri rarama kutengeserana, chiitiko chekutenga uko ruzivo rwechigadzirwa uye hushamwari hwechinyakare vatengesi vanosangana nekureruka kwekutenga online. Kambani yandakavamba, GetBEE, Inopa masimba mabhenji ekupa ecommerce saiti vashanyi nehupenyu, hwemagariro, hwekutenga concierge masevhisi - ine chaiyo brand brand. Uye, nekuda kwekudyidzana kwevanhu, tiri kuona mabhureki achiwana avhareji ye25% yekutengesa shanduko. Izvo zvinoshanda zvinoshamisa kana zvichienzaniswa neyakajairwa 1 uye 2% mareti ari kuwanikwa pane mazhinji e-commerce masaiti.
Nepo kudzvanya-kamwe kutenga uye kuzvitarisa-checkout kiosks ichipa kurerukirwa kweotomatiki, vatengi vachiri kurasikirwa nezano uye zano rinouya neanoziva kutengesa shamwari. Iko kubata kwevanhu kwave kushayikwa kubva pane yekutenga online ruzivo, asi nekuda kwe5G uye yakawedzera bandwidth, izvozvi zvave kugona kuitisa mhenyu vhidhiyo kubvunzana pane mutengi mbozhanhare mbozha uye kufamba navo kuburikidza nezve zvigadzirwa zvigadzirwa.
Aya pa-kufona, online ekutengesa vanobatana vari kuvaka hukama hwehukama nevatengi vepamhepo. Ivo vari kushandura tarisiro mukutengesa uye kunyange kushandisa yakasimba upsell matekiniki. Kupfuura kuomesera chigadzirwa kana mitengo, ndeye-pane-imwe kubatikana iyo vatengi vazhinji vanowana ndiyo itsva kukosha-yekuwedzera kune yavo yekutenga ruzivo. Izvi zvinobvunza mubvunzo, kana mukwikwidzi wako akakwanisa kupa iyi mhando yerwendo rwekutengesa rwemanzwiro, vangangotora nhamba yevatengi vako mwaka uno wezororo?
GetBEE Yakabatsira Kutenga Zvakaitika
'Ndiyo mwaka wekuita hunhu hwekutenga ruzivo kune vatengi vako. Nyaradzo uye manzwiro chikamu chikuru chekubudirira kwekutengesa, kufukidza zvakapfuura mainstays akadai semitengo uye kuvimbika kwemhando. Sezvineiwo, vatengesi vatengesi vagara vachitya kuti tekinoroji yaizovatsiva. Chokwadi ndechekuti, tekinoroji yakabatsira kuumba chiziviso chitsva uye kukosha kune mutengesi anoshamwaridzana, uye zvichave zvinonakidza kuona kuti basa rinoshanduka sei sezvo bhizimusi repamoyo richikura mukuzivikanwa mune iyi nyowani. hupfumi hwehukama.
Bhuka GetBee Demo
Tags: 5gecommerceManzwirokutenga kwepfungwakutenga mupfungwagetbeetinya-one kutengaonline kutengesa vanobatanaonline shoppingonline shopping mubatsiriself-checkoutkunotenga
Thea C. Myrhvold ndiye anozivikanwa pasi rose muvambi uye CEO weGETBee, B2B yekugovana ruzivo-yakagadzirirwa kuronga kugadzirisa zviitiko zvevatengi uye kushandura ramangwana rebasa. Nechirekodhi rekodhi yekuzadzikiswa muhunyanzvi uye hunyanzvi kweanopfuura makore gumi, iye anozivikanwa nehutungamiriri hwakasimba uye hunyanzvi hwekutaurirana nekwaniso yekuzvarwa yekuvaka uye kuyera tekinoroji kutanga.
Excel Mafomula Eakajairika Dhata Kuchenesa